I-WOWOW Intengiso yeKhitshi yeFilimu yeFiltha yeCombler
Ikhaya / IFaucets yasekhitshini / Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi / WOWOW Ikhitshi yoRhwebo yeMbiza yokuGcwalisa iPasta yengalo yeChannel
WOWOW Commercial Kitchen Pot lokufaka Filter iPasto Chrome
Ukuphakama kwesiqwengana sombiza ngaphezulu kwesitovu kunconywa kakhulu ngabathengi abavela eTaiwan, Japan, Germany nase Melika.
Kucocwa ngoomatshini bokufaka incasa kunye ne lathes, inika ubukhulu obuchanekileyo.
Le mveliso iqinisekisiwe phantsi kwe-ISO.
Ngokuguquguquka, le faucet yasekhitshini inokufikelela ngokulula kwiindawo ekunzima ukufikelela kuzo.
2311100C imiyalelo yokufaka
Isiciko sokufota embizeni yesitovu sakho sekhitshi 2311100C
Isiciko sokubhabha embizeni sisiciko esisebenzayo sokukhupha ikhitshi lakho kwindalo ende, edibeneyo. Ngokwesiqhelo isitofu sokucoca ngombiza sibekwe ngaphezulu kwesitovu ekhitshini lakho. Ngale ndlela uyakwazi ukuzalisa iimbiza ngamanzi, ngelixa zibekwe kwisitovu esele sikhona. Njengolu hlobo akudingeki ukuba uphathe iimbiza ezizele ubunzima ekhitshini lakho ukuya kwisitovu sakho ekhitshini. Izitya zokutshiza zebhotile yesiqhelo akufuneki zidityaniswe nezinye izitshizi zekhitshi ezijijileyo ngengalo edibeneyo. Umahluko ophambili phakathi kwetephu yokucoca ngesimbiza kunye nephedi yokudibanisa ekhitshini edibeneyo sisibonelelo samanzi afudumeleyo. Xa kukho isitya sokufefa embizeni, kufuneka kuphela ubonelelo lwamanzi abandayo. Kodwa ewe, ngokulula ungadibanisa isitofu sokucoca ngombhobho kunye nephedi yokudibanisa ekhitshini edityanisiweyo ukufikelela kwisivumelwano sokugqibela kuyilo lwakho lwekhitshi.
Xa uyila ikhitshi lakho, ekuqaleni usoloko ucinga indlela ekhitshini lakho lamaphupha ekufuneka ikhangeleka ngayo. Kodwa mhlawumbi okubaluleke ngakumbi kukusebenza kwekhitshi lakho elitsha lephupha. Kuya kufuneka ucinge ngendlela opheka ngayo, luhlobo luni lwezixhobo ozifunayo, apho ufuna khona imithombo yokukhanya, kunye nendlela onokuligcina ngayo ikhitshi lakho ngokulula. Yonke iqhekeza lesixhobo ekhitshini lakho linikezela ngeendlela ezininzi zokhetho. Oku kubalwa neefesitshi zakho zasekhitshini ngokunjalo. Kodwa into edla ngokulibaleka, kukusebenza kweyona mbiza yokucoca izimbiza. Kungenxa yokuba ayaziwa ngokubanzi. Kwelinye icala lolu hlobo lwephedi ekhitshini lunokwenza ubomi bakho bube lula xa upheka.
Kutheni ufuna itephu yokucoca umbiza?
Eyona projekthi ifanelekileyo yokwenza isitya sokucoca isitya kukuba ikusindisa uphethe isitya esinzima esizaliswe ngamanzi ukusuka kwisinki ekhitshini ukuya kwisitovu sakho ekhitshini. Oku kunokuba luncedo olukhulu kuwe xa ungakwazi okanye ungafuni ukuthwala izinto ezinzima. Ukuthwala iimbiza ezinzima kunokubangela uxinzelelo ezandleni, ezingalweni nasemqolo. Oko kunokuba yinto engalunganga xa sele ufumana iintlungu ngasemva okanye ezingalweni. Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba iimbiza ezinkulu azingqinelani kwisinki yakho yekhitshi. Ngesi sizathu kunokuba ngumngeni ukuzalisa imbiza enkulu ngamanzi.
Unokukhetha kwizinto ezimbini ezisisiseko xa kufikwa kumbhobho wokugcwalisa iifom. Kukho iipompo zokufaka iimbiza ezidityanisiweyo kunye kunye. Kuxhomekeke kubungakanani besitovu sakho sasekhitshini ukuba yeyiphi eya kukusebenzela kakuhle. Ukuba unesitovu sekhitshi esinezinto ezininzi zokutshisa, ithumbu lokugcwalisa imbiza elinamalungu aphindwe kabini liya kusebenza ngokukuko ngenxa yokufikelela kwalo. I-WOWOW yasekhaya yaseFama yokuFeyila iPompu yokuGcwalisa ityhubhu ikunika ingalo edityaniswe kabini enokufikelela ngokupheleleyo kwii-intshi ezingama-20. Ngeli faucet ende yokugcwalisa imbiza unokufikelela nakweyiphi na indawo esitovini sakho kwaye ke unikezela ngentuthuzelo ephezulu.
Iimpawu zefattery yokucoca ngembiza esebenzayo
Umbhobho wokugcwalisa imbiza WOWOW uluncedo kakhulu ngengalo edibeneyo, njengoko ungayisonga ingalo ubuyele ngokupheleleyo eludongeni lwesitovu. Ngale ndlela ayizukuthatha nasiphi na isithuba ekhitshini lakho kwaye ayizukujongeka ingalunganga. Ngenxa yolungelelwaniso lwayo olunokugcina indawo exabisekileyo yekhitshi. Le faucet yombhobho ekumgangatho ophezulu inokufakwa ukuze uhloniphe uyilo lwekhitshi lakho lokuhombisa. Awusoze uqaphele le fayipi yokugcwalisa imbiza eludongeni lwakho!
Abantu abaninzi bayoyika ukuba ityhubhu yokugcwalisa imbiza iya kuvuza kwaye ibangele ukonakala kwamanzi ekhitshini lakho. Ngokungafaniyo neepompo zesinki zekhitshi, ukuvuza kwamanzi kunokubanjwa sisinki yekhitshi. Ngomphanda wokugcwalisa itephu amanzi anokuwisa kwisitovu sakho sasekhitshini okanye kwikhawuntara yasekhitshini. Kwaye ekugqibeleni kumgangatho wakho wasekhitshini onokubangela umonakalo omkhulu. Ngenxa yezizathu zokhuseleko, iipompo zokufaka imbiza zihlala zixhotyiswe ngamanqanaba amabini. Ngale ndlela isitya sokugcwalisa imbiza sikhuselwe kabini ekuthontsizeni. Ingalo eyandisiweyo yombhobho wokugcwalisa imbiza yeWOWOW inezivalo ezimbini zolawulo lokuhamba kabini. Xa ugqibile ngokupheka, cima nje ivalve ephambili, ukuze kungabikho manzi anokuchitheka. Ngale ndlela ukhuseleko lwakho ekhitshini luqinisekisiwe.
Umgangatho ophezulu wokuphelisa isitya sefayile
I-WOWOW Modern Farmhouse Pot Filler Faucet Ipolish yeC Chrome yenziwe ngobuchwephesha bale mihla. Ngale ndlela i-WOWOW iqinisekisa ubungakanani obuchanekileyo belo failet yesitya sokucoca ukusebenza kakuhle. Le favelet ye-potow yokucoca ye-WOWOW inikezela isiqinisekiso sobomi obude ngenxa yomgangatho wayo wangaphakathi ocoliweyo. Yenziwe ngobhedu olucocekileyo oluphezulu-oluxineneyo (ubhedu). Uyaqinisekiswa ukuba amanzi okusela acocekileyo aphuma kule nqanawa ngaphandle kwezinto eziyingozi. Impilo yakho ingaphezu kwako konke okubaluleke kakhulu! Ngaphandle kwento le mveliso yeWOWOW iye yaqinisekiswa yi-ISO.
Amanzi agqibeleleyo anika le potuc filler faucet
Ngomgangatho ophezulu we-360-degree spout, unokufikelela phantse kuyo nayiphi na indawo kwaye ugcwalisa nantoni na ngokulula. Iiplahla zenziwe ngeyona nto iphambili kwaye zikhululekile ukuphatha. Ujonga umgangatho ngokukhawuleza xa usebenzisa ii-valves. Imo yokuhamba kwelinye icala ilungele ukuzaliswa kwamanzi. Inika uxinzelelo oluzinzileyo lokuhambisa umsinga wamanzi rhoqo. Iivalve zoxinzelelo oluphezulu ziphephe ukutshiza kunye nokutshiza ukukunika intuthuzelo elungileyo. Yilo nto kanye oyifunayo kwiikhitshini zekhitshi lakho!
Isiciko sokutshiza sembiza seWOWOW sigqityiwe ngomthi omdaka kunye nokudinwa. Inomgangatho ogqityiweyo we-chrome ogqityiweyo oya kulungeleka phantse kuyo nayiphi na ikhitshi yoyilo. I-Wowow's potler faucet ayikhuhli kwaye iyakulula ukuhlamba. Ukugcina isitya sakho sokucoca ngombiza kulula kakhulu nako. Ungayigcina isitya sakho sombiza esitsha njengento entsha ixesha elide. I-Wowow inika iwaranti yeminyaka emihlanu kuyo yonke ifayile yayo. Ngesi sizathu uyazi ukuba uyifumene itowuni yefilter yombiza ekubonelela ngeyona nto inexabiso lomgangatho. Ngesiqinisekiso sokubuya semva kweentsuku ezingama-5, ungasibuyisela isiphoso sakho secwecwe lokucoca ulusu ngaphandle kwengxaki ukuba awuzukuyithanda. Kodwa Siyazi ukuba oku ayizokwenzeka. Siyathemba kwimveliso yethu!
Izibonelelo zompu wephedi lokucoca ngezantsi:
Zalisa iimbiza zakho kwisitovu sakho
· Ingalo ehlanganisiweyo ukuze ibeke lula ifoski yokubhabha ngembiza
· Izixhobo zombini zixhobile ukuze zibe bhetyebhetye ngokufanelekileyo
· Unokufikelela ngokulula kwiindawo ezingenakufikeleleka nge-intshi ezingama-20
· Uyilo olwahlukileyo lwe-chrome
I-SKU: 2311100C iindidi: IFaucets yasekhitshini, Imbiza yokuGcwalisa iiMpompo zeKhitshi tags: Iphosiwe, Imbiza yePot, Uluhlu lweNdonga
15.51 x 9.61 x 2.05 intshi
imbiza yokugcwalisa ifuetet chrome
Pot Pot Filler Faucet Ukusonga kabini ukuphatha iChannel
Urhwebo / irestyu / indawo yokuhlala / ngaphakathi
Ibhotile yokugcwalisa imbiza / isixhobo seNPT; I-aeractor ye-Neoperl ABS; Izixhobo ezongeziweyo (iJamani iFischer nylon anchor bolt)